Humnootii Nagaa Eegsisan Gadhiisisuuf Hojjatamaa Jira
FAAYILII - Konkolaataa Tokkummaa Mootummootaa Sentiraal Arikaa Ripablikiitti, Muddee 5, 2021.
Afrikaa waaltaa keessatti miseensoota isaa imala nagaa eegsisuu irra ituu jiranii qabaman Arfan akka gadhiifaman gochuuf hojjachaa kan jiru ta’u Tokkummaan Mootummootaa beeksisee jira. Namoonni arfan kan hidhaman gara jalqaba torban kanaatti ture.
Arfanuu miseensoota waraana Faransaayii yoo ta’an kan hidhamanis Wiixata dabree ture. Dirree xayyaaraa magaalaa galma mootummaa kan taate Baanguu’ii keessatti ennaa Jeneeraala Faransaayii Steefan Marchenior iif eegumsa gochaa turanti qabaman.
Jeneraaltichi ajajaa humnootii naga eegumsaa kan Tokkummaa mootummootaa turan.
Wiixata dabree prezidaantiin Ripaabliika Afrikaa waaltaa Beljiyamii ennaa deebi’anti Jeneraaltichi dirree xayyaaraa sana turan.Isaaniis eega biyyatti gadhiisanii ba’anii booda, eegdonni isaanii arfan hidhamanii sa’atii walakkaa booda xayyaarri prezidaantin biyyatti qubatte jedhamee jira.
Dubbii himaan Tokkummaa Mootummootaa Steefan Jaariik Kibxata dabree Niiw Yoork keessatti oduu gabaastotaaf akka ibsanti, qaamnii imala nageenya eegsisuu mootummaa Ripaablikii Afrikaa waaltaa wajjiin quba kan qabu yoo ta’u warra hidhame 4n gadhiisiuuf hojjataa jiru.
Maaliif akka hidhaman polisiin ibsa kan hin laanne.